ဂီတ Catalog - အဆိုပါစုန်းမ '' ဒါဝိဒ်သည် Warin ရှောလမုန်သည်အထူးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူပုလွေ choir အဘို့အကြော် ''
Home / ကရိယာတန်းဆာပလာနှင့်ဆိုင်သော / Woodwind / ပလှေ / Flute မှ Choir / အထူးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူပုလွေ choir များအတွက်စုန်းမ '' ကြော်
အမျိုးအစား: Flute မှ Choir
တစ်ဦးပုလွေ choir ၏ခေါင်းဆောင်များကမေတ္တာရပ်ခံသည့်အတိုင်းဤနေရာတွင်တစ်ဦးကဆက်ပြောသည်သံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (ကျောချမ်းဖွယ်လေတိုက်မှုတ်, အကင်းစသည်တို့သို့ plopping အဆိုပါပါဝင်ပစ္စည်းများကိုယ်စားပြုလျှာကိုထီး) နှင့်အတူစုန်းမ '' ကြော်ပိုပြီးလေထုဗားရှင်းနှင့်မူရင်းရှိတ်စပီးယားစုန်းကနေရံဖန်ရံခါစကားပြောကိုးကားဖြစ်ပါသည် '' ဓမ္မသီချင်း။
အဆိုပါ brinded ကြောင်သုံးကြိမ်မြောက်အောင် mew'd တော်မူပြီ။
သုံးကြိမ်မြောက်အောင်နှင့်တစ်ကြိမ်, အ hedgepig whin'd ။
Harpier အော်ဟစ်: - '' TIS အချိန်! '' TIS အချိန်!
ဘားပြုပ်, un-der အအေးကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ကြောင်း,
ပထမဦးဆုံးကိုယ့်က 'Charm အိုးကိုယျတျောသပြုတ်!
မီးမီးလောင်, ကင်းပူဖောင်း။ (စသည်တို့ကို) "
(: Hubble ပူဖောင်းပင်ပန်းခြင်းနှင့်ဒုက္ခစုန်း '' ဘီယာအရက်ချက်နဲ့ကျွန်မနှစ်ဆရှိသည်လိမ့်မယ်ငါသည်လည်းရှိတ်စပီးယား misquoting ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဟာသဆက်ပြောသည်ပါပြီ!)
အဘို့အ 1 ပြန်လည်သုံးသပ် အထူးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူပုလွေ choir များအတွက်စုန်းမ '' ကြော်
Janice Spooner - ဧပြီလ 21, 2019
ကျနော်တို့လက်ခံရရှိပုလွေ choir ခဲ့ကြသည်ငါတို့သည်ကိုချစ်၏။ ကျနော်တို့နေတဲ့ဟယ်လိုစီးရီးထိုသို့ပြုကြ၏ NFA အဲဒီနောက်အောက်ပါအောက်တိုဘာလမှာသြဂုတ်လအတွင်းဟယ်လိုထိုသို့ပြုကြ၏။ လူတိုင်းကျနော်တို့ခဲ့ကြသည်ဘယ်မှာသိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုန်းစုန်းဦးထုပ်ဝတ်ဆင်။ ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုမှာ raucous, တဦးတည်း giggly ကြီးနှင့်အခြားလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်။
ပုလွေ sextet (သို့မဟုတ်ပုလွေ choir) အတွက်စီစဉ်ပေး - ဒါဝိဒ်သည်အဗရှလုံကွပ်မျက်ခဲ့ကွောငျးကွားသောအခါ
Palestrina အားဖြင့် Missa Tu Es Petrus ( "ကိုယ်တော်သည်အနုပညာပတေရုသ" ပေါ်တွင် Mass) ပုလွေ sextet သို့မဟုတ်ပုလွေ choir စီစဉ်
ပုလွေ choir တစ်ချိုးငှက်၏အတောင်ပံအို
Flute မှ Choir များအတွက်စုန်းမ '' ကြော် ပုလွေ choir တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲ
string ကို quartet သို့မဟုတ် string ကိုသံစုံတီးဝိုင်းများအတွက် Bifocal အဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်း
သင်ကြည့်ပါတယ်: အထူးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူပုလွေ choir များအတွက်စုန်းမ '' ကြော်